နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူနိုင်ငံ သမ္မတ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ဟောပြောဆွေးနွေး | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူနိုင်ငံ သမ္မတ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ဟောပြောဆွေးနွေး
Posted By: mygate wayon: ဩဂုတျ 23, 2018 In: AppointmentNo Comments
စင်ကာပူ သြဂုတ် ၂၁
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြဂုတ် ၂၁ ရက် တွင် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ISEAS-Yusof Ishak Institute ၌ ဟောပြောဆွေးနွေးသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mrs. Halimah Yacob နှင့် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် Istana Presidential Palace ၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ရိုးရာအိမ်တွင်းမှု လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာ လီရှန်လုံးနှင့် Istana Presidential Palace ၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ- စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးဖော်ဆောင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အပြုသဘောဆောင် ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးရေး၊ အာဆီယံအပါအ၀င် နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာတွင် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စင်ကာပူနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာ လီရှန်လုံးက Clarke Quay ၌ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Teo Chee Hean နှင့် Grand Hyatt Hotel ၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံမူဘောင်အတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများသို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr.Vivian Balakrishnan ၊ ISEAS-Yusof Ishak Institute မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် Institute of Southeast Asian Studies Board of Trustees မှ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Professor Wang Gungwu ၊ Institute of Southeast Asian Studies မှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr.Choi Shing Kwok တို့နှင့် Grand Hyatt Hotel ၌ တွေ့ဆုံရာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များက Lecture အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အဆိုပါဟိုတယ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲများနှင့် ရှေ့ခရီးလမ်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပ သည့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Teo Chee Hean က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွေးနွေးပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အသွင်းကူပြောင်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်မှန်းချက် ၅ ရပ်နှင့် မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်ပါဝင်သော မြန်မာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည် နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ကုလသ မဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီပွား ရေးကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဖြေလျော့မှုများ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအခြေအနေ၊ မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တက်ရောက်လာကြသူများက သိရှိလို သည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးကြရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားကြသည်။
ISEAS–Yusof Ishak Institute ကို သုတေသနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ပါလီမန်ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စတင်တည်ထောင်စဉ်က Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသမ္မတအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ISEAS – Yusof Ishak Institute ဟု ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းမှ သုတေသနလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလေ့လာခြင်း၊ ဒေသတွင်း မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာခြင်း၊ ဒေသတွင်း လူမှုစီးပွားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာခြင်းစသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် သုတေ သနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအား အထူးပြုလေ့လာခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် စသည့် ဒေသတွင်းငါးနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လေ့လာမှုအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ အဖွဲ့ အစည်းမှ စာအုပ်များ၊ ဂျာနယ်များနှင့် သုတေသန စာစောင်များကိုလည်း ရေးသားဖြန့် ချိလျက်ရှိရာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့ ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် မြန်မာသံရုံးသို့ရောက်ရှိပြီး သံရုံးနှင့် စစ်သံရုံးတို့မှ သံရုံးမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးမှာကြား သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စင်ကာပူ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Gardens by the Bay ပန်းခြံသို့သွားရောက်ပြီး လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ စငျကာပူနိုငျငံ သမ်မတ၊ အစိုးရအဖှဲ့ အကွီးအကဲမြားနှငျ့တှဆေုံ့ပွီး ISEAS- Yusof Ishak Institute ၌ ဟောပွောဆှေးနှေး
စငျကာပူ သွဂုတျ ၂၁
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ သွဂုတျ ၂၁ ရကျ တှငျ စငျကာပူသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ၊ ၀နျကွီးခြုပျ၊ ဒုတိယ၀နျကွီးခြုပျတို့နှငျ့တှဆေုံ့ပွီး ISEAS-Yusof Ishak Institute ၌ ဟောပွောဆှေးနှေးသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ စငျကာပူနိုငျငံ သမ်မတ H.E.Mrs. Halimah Yacob နှငျ့ ယနေ့ ဒသေစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁၁ နာရီတှငျ Istana Presidential Palace ၌ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ စငျကာပူနိုငျငံအကွား နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေး၊ ရိုးရာအိမျတှငျးမှု လကျမှုလုပျငနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပညာရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ စငျကာပူနိုငျငံ ၀နျကွီးခြုပျ မစ်စတာ လီရှနျလုံးနှငျ့ Istana Presidential Palace ၌ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ- စငျကာပူ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေး၊ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမွှငျ့တငျရေး၊ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့ အလမျးမြား ဖနျတီးဖျောဆောငျရေး၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ စငျကာပူနိုငျငံမှ အပွုသဘောဆောငျ ဆကျလကျထောကျခံအားပေးရေး၊ အာဆီယံအပါအ၀ငျ နိုငျငံ တကာမကျြနှာစာတှငျ ပိုမိုပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးကွသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ စငျကာပူနိုငျငံ ၀နျကွီးခြုပျ မစ်စတာ လီရှနျလုံးက Clarke Quay ၌ တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ့ နလေ့ယျစာစားပှဲသို့ တကျရောကျသညျ။
မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ စငျကာပူနိုငျငံ ဒုတိယ၀နျကွီးခြုပျ H.E.Mr. Teo Chee Hean နှငျ့ Grand Hyatt Hotel ၌ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီ အသှငျကူးပွောငျးမှု လုပျငနျးစဉျမြား၊ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနျိုငျငံအကွား စီးပှားရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ အာဆီယံမူဘောငျအတှငျး ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲမြားသို့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသောငျးထှနျး၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ၀နျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ သမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယ၀နျကွီး ဦးမငျးသူ၊ စငျကာပူနိုငျငံ ဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးဌေးအောငျနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ စငျကာပူနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Dr.Vivian Balakrishnan ၊ ISEAS-Yusof Ishak Institute မှ ဒါရိုကျတာအဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈကွသညျ့ Institute of Southeast Asian Studies Board of Trustees မှ ဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ Professor Wang Gungwu ၊ Institute of Southeast Asian Studies မှ ဒါရိုကျတာဖွဈသူ Mr.Choi Shing Kwok တို့နှငျ့ Grand Hyatt Hotel ၌ တှဆေုံ့ရာ ဒါရိုကျတာအဖှဲ့ဝငျမြားက Lecture အစီအစဉျမြားကို ရှငျးလငျးတငျပွကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ အဆိုပါဟိုတယျ၌ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီ အသှငျကူးပွောငျးမှု ဖွဈစဉျတှငျ တှကွေုံ့နရေသော အခကျအခဲမြားနှငျ့ ရှခေ့ရီးလမျးခေါငျးစဉျဖွငျ့ ကငျြးပ သညျ့ ဟောပွောဆှေးနှေးပှဲသို့ တကျရောကျသညျ။
ဟောပွောဆှေးနှေးပှဲတှငျ စငျကာပူနိုငျငံ ဒုတိယ၀နျကွီးခြုပျ H.E.Mr. Teo Chee Hean က အဖှငျ့အမှာစကားပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ဆှေးနှေးပွောကွားရာတှငျ မွနျမာနျိုငျငံအနဖွေငျ့ ကွုံတှခေဲ့ရသညျ့ အသှငျးကူပွောငျး ရေးလုပျငနျးစဉျမြား၊ နိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ရညျမှနျးခကျြ ၅ ရပျနှငျ့ မဏ်ဍိုငျကွီး ၃ ရပျပါဝငျသော မွနျမာ စဉျဆကျမပွတျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးစဉျမြား၊ ရခိုငျပွညျ နယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာအစိုးရ၏ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ ကုလသ မဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ စီပှား ရေးကဏ်ဍနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုအတှကျ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားနှငျ့ ဖွလြေော့မှုမြား ဆောငျရှကျ ပေးခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနျိုငျငံ ပညာရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေး ကဏ်ဍအခွအေနေ၊ မွနျမာ-စငျကာပူ နှဈနျိုငျငံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
ဆှေးနှေးဟောပွောမှုမြားနှငျ့စပျလဉျြး၍ တကျရောကျလာကွသူမြားက သိရှိလို သညျမြားကို မေးမွနျးဆှေးနှေးကွရာ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ တာဝနျရှိသူ မြားက ပွနျလညျရှငျးလငျးဖွကွေားကွသညျ။
ISEAS–Yusof Ishak Institute ကို သုတသေနဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးအဖွဈ ၁၉၆၈ ခုနှဈတှငျ ပါလီမနျဥပဒအေရ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး စတငျတညျထောငျစဉျက Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ဟု ချေါဆိုခဲ့ပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈ သွဂုတျတှငျ စငျကာပူနိုငျငံ၏ ပထမဆုံးသမ်မတအား ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ ISEAS – Yusof Ishak Institute ဟု ပွောငျးလဲခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါအဖှဲ့အစညျးမှ သုတသေနလုပျငနျးမြားလညျး ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ဒသေတှငျးစီးပှားရေးလလေ့ာခွငျး၊ ဒသေတှငျး မဟာဗြူဟာနှငျ့ နိုငျငံရေးလလေ့ာခွငျး၊ ဒသေတှငျး လူမှုစီးပှားနှငျ့ ယဉျကြေးမှုလလေ့ာခွငျးစသညျ့ ခေါငျးစဉျမြားဖွငျ့ သုတေ သနလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ။
ဒသေတှငျး နိုငျငံမြားအား အထူးပွုလလေ့ာခွငျးမြားကိုလညျး ဆောငျရှကျလကျြရှိ ပွီး အငျဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မွနျမာ၊ ထိုငျးနှငျ့ ဗီယကျနမျ စသညျ့ ဒသေတှငျးငါးနိုငျငံနှငျ့ ပတျသကျ၍လညျး လလေ့ာမှုအစီအစဉျမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ အဆိုပါ အဖှဲ့ အစညျးမှ စာအုပျမြား၊ ဂြာနယျမြားနှငျ့ သုတသေန စာစောငျမြားကိုလညျး ရေးသားဖွနျ့ ခြိလကျြရှိရာ နိုငျငံပေါငျး ၁၀၀ ကြျောသို့ ဖွနျ့ခြိနိုငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ညနပေိုငျးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့သညျ မွနျမာသံရုံးသို့ရောကျရှိပွီး သံရုံးနှငျ့ စဈသံရုံးတို့မှ သံရုံးမိသားစုမြားနှငျ့ တှဆေုံ့၍ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက လိုအပျသညျမြားကို ဆှေးနှေးမှာကွား သညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ စငျကာပူ နိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးဌေးအောငျက တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ့ ညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျကွသညျ။
ညပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ စငျကာပူနိုငျငံရှိ Gardens by the Bay ပနျးခွံသို့သှားရောကျပွီး လှညျ့လညျကွညျ့ရှု လလေ့ာရာ တာဝနျရှိသူမြားက လိုကျလံရှငျးလငျး ပွသကွသညျ။